Scotland inobata referendamu yechipiri parusununguko kubva kuUK muna 2023
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Scotland Breaking News » Scotland inobata referendamu yechipiri parusununguko kubva kuUK muna 2023
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Scotland Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Musangano weScotland National Party wakatsigira hurongwa hwehurumende yeScotland hwekuita nguva yeimwe referendamu yekusununguka panguva "yekutanga" ingangoitika mushure medambudziko re COVID-19.
Gurukota rekuScotland rinoda rechipiri rusununguko referendamu.
Chechipiri Scottish rusununguko referendamu ichaitwa mukupera kwa2023.
Referendamu ichaitwa nekukurumidza nguva inogona kuitika mushure meCVV-19 dambudziko.
Muhurukuro yakapihwa musangano weScottish National Party (SNP) wematsutso nhasi, Gurukota rekutanga reScotland, Nicola Sturgeon akazivisa kuti bato rake rinotarisira kuita imwe referendamu yepamutemo yekusununguka kubva kuUnited Kingdom.
Gurukota rekutanga reScotland, Nicola Sturgeon akazivisa kuti bato rake rinotarisira kuita imwezve referendamu yepamutemo parusununguko kubva kuUnited Kingdom.
Sturgeon akataura kuti wechipiri Kuzvimiririra kweScotland referendamu ichaitwa mukupera kwa2023 kana COVID-19 denda iri kutonga, ndokukumbira hurumende yeBritain kuti ibvumirane nayo "nemweya wekubatirana".
Sekureva kwaSturgeon, vanhu vemuScotland vakasarudza Paramende nyowani yeScotland muna Chivabvu, iyo ine "yakajeka uye yakanyanya kuwanda mukuda kwereferendamu yekuzvimirira".
“Sezvatinobuda kubva mudenda, zvisarudzo zvinowira pasi izvo zvichagadzirisa Scotland kwemakumi emakore anotevera. Saka tinofanira kusarudza. Ndiani anofanirwa kunge achitora sarudzo idzi: vanhu pano muScotland kana hurumende dzatisingavhotere kuWestminster. Ndiko kusarudza kwatinoda kupa vanhu vekuScotland mureferendamu zviri pamutemo mukati menguva ino yeParamende - COVID ichibvumidza, mukupera kwa2023, ”akadaro mukutaura.
Sturgeon akawedzera kuti "hazvisi zvehurumende yeWestminster iyo inongova nenhengo nhatu dzeparamende muScotland kusarudza ramangwana redu pasina mvumo yevanhu vanogara pano."
Sturgeon akati haazo "gadza chaiyo hutachiona" hwekuti vhoti inogona kuitika riini - "asi iwe ungade kuwona iyo COVID mamiriro ari kudzorwa".
The Scottish National Party musangano wakatsigira zvirongwa zvehurumende yeScotland nezve nguva yekumwe kuratidzira referendamu panguva "yekutanga" ingangoitika mushure mematambudziko eCOVID-19.
Bato rakati zuva iri rinofanirwa kutariswa ne "nzira dzinofambiswa nedata" nezvekuti dambudziko rehutano hweveruzhinji rapera riini.
Referendamu yekuzvimiririra kweScotland yakaitwa muna 2014, apo makumi mashanu muzana evhoti vakatsigira kugara muBritain. Nguva pfupi mushure mekunge bato raSturgeon rawana kukunda kwechina kwakateedzana musarudzo dzeparamende yeScotland muna Chivabvu, akavimbisa kukurudzira rutsigiro rwechipiri rusununguko kana dambudziko redenda rapfuura.
Mutungamiri weBritain, Boris Johnson akambotaura kuti haazobvumidze referendamu yechipiri yekuwana kuzvitonga.
Hurtigruten Expeditions inosvitsa yega Galapagos ...